Nanohana ny kanto malagasy… : nodimandry ny tale jeneralin’ny CGM | NewsMada
Nanohana ny kanto malagasy… : nodimandry ny tale jeneralin’ny CGM
Maloka indray ny habakabak’ireo mpanakanto notezaina sy nivelatra teo anivon’ny Cercle germano-malagasy (CGM), etsy amin’ny tohatohabaton’Antaninarenina. Nodimandry, tamin’iny faran’ny herinandro iny, ny tale jeneralin’ity foibe alemà ity.
65 taona i Eckehart Olszowski izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Araka ny fantatra, fahatsentsenan’ny lalàndra tao amin’ny fony no nitarika izany. Tsy zovina amin’ny mpanakanto malagasy izy ary azo lazaina ho ray mpiantoka, mpanohana sy mpiaro ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy.
Ole, anarana niantsoan’ireo mpanakanto sy sokajin’olona maro nifanerasera taminy azy. Tsy vao haingana fa efa nandritra ny 30 taona mahery ny nitantanany ny CGM. Marobe ireo talenta nasondrotr’i Ole, toa an-dry Rossy, izay nilaza fa tsy nahavita fitetezam-paritra betsaka tany Eoropa, tany am-piandohana, raha tsy teo ity talen’ny CGM ity.
« Nampianatra ny fahavitrihana amin’ny asa, ny fanajana fotoana ary ny maha matihanina izy … Mahitsy sy mijoro amin’ny heviny izy (i Eckehart Olszowski) ary vitsy ireo mahaozongozona izany », hoy hatrany i Rossy. Ankoatra ito farany, anisan’ireo mpanakanto notohanan’i Ole ka nisandratra sy manan-daza, mandraka izao, ry Olombelo Ricky.
Ankoatra izany, ao amin’ny CGM no ivon’ny mpiangaly bà gasy ; sehatra filalaovan’ny mpitendry jazz ; toeram-panovozam-pahalalana ho an’ny te hahay karazan-dihy samihafa, sns. Raha fehezina, nanome sehatra ho an’ny karazan-javakanto samihafa ity talen’ny CGM ity. Tsy ankanavaka io fa samy mahazo ny anjarany avokoa : ny nentim-paharazana hatramin’ireo kanto nentin’ny fironana ankehitriny.
Ny gazety Taratra dia mirary fiononana ho an’ny fianakaviana sy ny mpikolo ny kanto rehetra.